Ceni : “atahorana raha ambany ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy” | NewsMada
Ceni : “atahorana raha ambany ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy”
“Iaraha-mahafantatra fa raha ambany ny taham-pahavitrihana amin’ny fifidianana, mampatahotra ny zava-kitranga. Satria tsy ampy ny vaikan’ny mpitondra fanjakana amin’ny fampandrosoana amin’izany.”
Izay ny nambaran’ny filohan’ny Ceni, Rakotomanana Hery, teny Nanisana, afakomaly, manoloana ny tsy fahatratrana ny fanambin’ny Ceni hahatonga ny isan’ny mpifidy ho 10 tapitrisa.
Vinan’ny Ceni amin’izao ny fitanana ny fiaraha-miasa amin’ny mpiara-miombon’antoka hiarovana fifidianana madio, mangarahara, lavitry ny korontana. Mba hahatonga an’i Madagasikara hanomboka amina zavatra tsara fototra izany. Fototra iray lehibe amin’ny fitondram-panjakana ho avy raheteo izay.
Firariany ny hivoahan’ny lalàm-pifidianana faran’izay haingana, fa efa somary tratra aoriana izany amin’izao. Manohy ny asa isan’andro ny Ceni eo anatrehan’ny lalàna manankery amin’izao, raha tsy mivoaka ny lalàna vaovao.
Afa-po amin’ny asany ny Ceni
Mihoatra ny 80 % avokoa ny asa vita. Sarotra ny hoe 100% izany, fa tsy mora ny manao ny zavatra, araka ny fanazavany. Misy ny olana isan-karazany eo amin’ny fanatanterahana ny asa, fa tsy feno tanteraka ny enti-manana amin’izay rehetra atao. “Ny azo lazaina, afa-po izahay tao anatin’ny asa nataonay tamin’ny taona 2017″, hoy izy.
Tsy misalasala eo amin’ny asa rehetra ataony ny Ceni, fa eo amin’ny lalàna misy amin’izao fotoana izao no anatanterahany azy hatramin’izao. Eo ny fanavaozana ireo didy aman-dalàna mifehy ny fifidianana, ny fanatsarana ny lisi-pifidianana, ny fanabeazana sy fanentanana ny mpifidy ary ny fampahalalam-baovao samihafa. Ny tsy fahatomombanana amin’ny lalàna sy ny tsy fahampian’ny enti-manana no anisan’ny sakana amin’izany.